Izindlu zeevenkile ezithengiswayo kunye nezerente eNorthwich, eCheshire
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Amakhaya okuhlala Izindlu zekhaya Cheshire Northwich
I-1-7 yoluhlu lwe-7
Indawo yokulala ye-2 i-Cottage yokuthengisa eNorthwich, eCheshire
** Indawo yokuhlala enomlinganiso omangalisayo kwindawo yomlingo! ** Iimbono zodidi lwehlabathi, amagumbi okuwamkela 2, amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela elineshawa eyahlukileyo, indawo esezantsi yeWC. I-garage efunyenweyo + indawo yokusebenzela! Akukho Chain. Ukunikeza ngokugqithileyo.Idolophu yaseKhaya yenye yezi ndawo ezinqabileyo ezizisa umtsalane, umgangatho ...
Kwintengiso | 2 iibhedi | 1 ibhafu
Northwich in Cheshire, Cw8 2rs
Published by Morgans Of Cheshire
umbono Izindlu zekhaya ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
** I-cista enobukhazikhazi eyandisiweyo ** entliziyweni ye-Weaverham yakudala! Okungaphezulu kakhulu kunokudibana kweliso kubandakanya ukwamkelwa ngokufanelekileyo kwe-2, igadi, kunye nekhitshi emnandi ekhitshini! Imifanekiso yoqobo eyothusayo kunye negumbi lokuhlambela elinomtsalane! Ukusukela malunga nenkulungwane ye-18, eli khaya lemilingo libekwe ngendlela entle ...
Northwich in Cheshire, Cw8 3ey
umbono Izindlu zekhaya ishicilelwe kwiinyanga 2 ezidlulileyo
** Ukuqaqamba kweempawu ezintle | Ukubekelwa emazantsi kweBanga elihle kakhulu Ndidwelise i-St Mary's Churchin yentliziyo ye-weaverham yakudala! Imnandi kwaye iyikhaya ekhitshini lokutyela, igumbi lokulala eli-2 elithandekayo, igumbi lokuhlambela langoku kunye negadi entle! Isigcawu somtsalane wesiNgesi sakudala esimangalisayo kwimo entle kunye nembali ...
Northwich in Cheshire, Cw8 3nn
Indawo yokulala ye-3 i-Cottage yokuthengisa eNorthwich, eCheshire
** I-Handsome yanamhlanje yeKhitshi entliziyweni yeaaverham yakudala ** Uyilo lokuwina, uyilo olukhulu oluvulekileyo lokuhlala / lokutyela, ikhitshi elinobuso, ulondolozo olusezantsi olujonge ezantsi kwigadi ejongene ne-driveway kunye negaraji! Akukho xakeka! Ikhaya elimnandi imizuzwana embalwa ukuhamba kuyo yonke i-Weaverham's sho ...
Northwich in Cheshire, Cw8 3ha
Isishwankathelo Siyavuya ukukwazi ukukunikezela kule ndlu intle kakhulu yokulala phakathi kwendlu enethala, ehlala ngaphandle kweZiko leDolophu laseNorthwich. Indawo elungiselelwe indawo yokuhlala / iivenkile zalapha ekhaya kunye nokufumana izibonelelo zokuhombisa kwangoku kuyaboniswa!
Northwich in Cheshire, Cw8 4ds
Published by Swetenhams - Northwich
umbono Izindlu zekhaya ishicilelwe kwiinyanga 3 ezidlulileyo
Indawo yeLungelo lokuboniswa kwepropathi enamagumbi okulala amathathu eneembono ezithatha ukuphefumla ibekwe kwilali efunwayo emva kwedolophu yeWhitegate entliziyweni yeCheshire ngokufikelela ngokulula kwiikhonkco zendlela kunye nesikhululo sikaloliwe kwaye sikufuphi neVale Royal Golf Club kunye nethala elidumileyo. indawo yasekhaya kunye ...
Northwich in Cheshire, Cw8 2bq
Published by Yopa
umbono Izindlu zekhaya ishicilelwe kwiinyanga 6 ezidlulileyo
I-3 I-Cottage Bed kwi-Rental e-Northwich, eCheshire
* Imirhumo yesicelo encitshisiweyo ekhoyo *** akukho ndlela yediphozithi efumanekayo kubaqeshi, ukhuseleko olukhulu lwabanini bamhlaba ** (nceda ufowunele ulwazi oluthe kratya) .Bekwe entliziyweni kwilali yaseDavenham, le ndawo inophawu lubuyiselwe ngovelwano ukubonelela ngendawo yokuhlala yanamhlanje ngexesha ...
Yeyokuqesha | 3 iibhedi | 1 ibhafu
Northwich in Cheshire, Cw9 8na
Published by Leaders - Northwich
umbono Izindlu zekhaya ishicilelwe kwiinyanga 10 ezidlulileyo
A indlu ,, yindlu encinci. Inokuphatha ubume bokuba sisakhiwo esidala okanye esidala. Ekusetyenzisweni kwale mihla, ikhitshi lihlala liyinto ethoba isidima, ehlala ihlala icocekile, indawo yasezilalini okanye eyasemaphandleni. Eli gama livela kulwakhiwo lwaseNgilani, apho lalibhekiselela kwindlu enomhlaba ophantsi kunye nendawo yokuhlala kunye nomgangatho ongaphezulu kwigumbi elinye okanye nangaphezulu elifanelekileyo phantsi kweefestile. KwisiNgesi saseBritane eli gama ngoku lithetha indawo encinci yokuhlala kwendabuko, nangona inokusetyenziselwa kulwakhiwo lwanamhlanje olwenzelwe ukufana nezindlu zemveli ("izindlu ezihlekisayo"). Izindlu zangasese zinokudilikizwa izindlu, okanye zoyikiswe, ezinjengezo zakhelwe abasebenzi bezindlu zasemigodini. Indawo yokuhlala eboshwe enikwa abasebenzi basezi fama yayidla ngokuba yindlu ye-cottage. Amafama amantshontsho ngaphambili ayesaziwa ngokuba ziicotter. Indawo yeholide ikhona kwiinkcubeko ezininzi phantsi kwamagama ohlukeneyo. KwisiNgesi saseMelika, "i-cottage" yigama elinye lemizi yeholide, nangona banokubizwa ngokuba yi "khabin", "chalet", okanye "inkampu". Kumazwe athile (umzekelo, iScandinavia, iBaltics, neRussia) igama elithi "ikhetshi" inezithethantonye zalapha ekhaya: EFinland mökki, e-estonia suvila, kwinqanaba leSweden, kwi-hytte yase-Norway (ukusuka kwigama lesiJamani elithi Hütte), kwiSlovak chalupa, ngesiRashiya I-дача (dacha, enokubhekisa kwikhaya leholide / ihlobo, elihlala likhona kufutshane nomzimba wamanzi). Kukho izindlu zokuhlala ezisesitratweni kwizixeko zaseMelika ezazakhiwe ngokuyintloko ngenjongo yamakhoboka ezindlu Kwiindawo ezinjengeCanada, "ikhenkethi" ayithwali zinto zilinganayo ngobukhulu (thelekisa ne-vicarage okanye i-hermitage)
INorthwich yidolophu kunye neparish yaseburhulumenteni kwigunya elinobumbano leCheshire West kunye neChester kunye ne-festival ye-Cheshire, eNgilane. Ilele entliziyweni yethafa laseCheshire, ekudibaneni kwemilambo iWeaver kunye neDane. Idolophu imalunga ne-18 yeekhilomitha (i-29 km) empuma yeChester, i-15 yeekhilomitha (i-24 km) emazantsi eWarrrington, i-19 iikhilomitha (iikhilomitha ze-31) emazantsi eManchester kunye ne-12 yeekhilomitha (i-19 km) emazantsi kwiSikhululo senqwelomoya saseManchester. Inani labemi bepalamente ye-19,924 kwi-2011. INorthwich yabizwa njengelinye lawona mazwe ahlala e-United Kingdom yi-Sunday Times e-2014.Indawo engqonge iNorthwich isetyenziselwe iipani zayo zeetyuwa ukusukela ngexesha lamaRoma, xa le ndawo yaziwa njenge-Condate. Idolophu ichaphazeleke kanobom kwimigodi yetyuwa, kwaye ukuxhomekeka ngaphambili kuyingxaki ebalulekileyo. Umsebenzi wokuzinza okumayini ugqityiwe kwi2007.
I-United Kingdom (i-UK), ngokusemthethweni i-United Kingdom ye-Great Britain kunye ne-Northern Ireland, kwaye ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi-Bhritane, lilizwe elizimeleyo elikufuphi nonxweme olusentshona-ntshona yelizwekazi laseYurophu. I-United Kingdom ibandakanya isiqithi saseGreat Britain, emantla-empuma yesiqithi seIreland, kunye neziqithi ezininzi ezincinci. I-Northern Ireland kuphela kwecandelo le-United Kingdom elabelana ngomda womhlaba kunye nelinye ilizwe elizimeleyo, iRiphabhliki yase-Ireland. Ngaphandle kwalomda womhlaba, i-United Kingdom ijikelezwe luLwandlekazi lweAtlantiki, kunye neNorth Sea ngasempuma, i-English Channel ukuya emazantsi kunye nolwandle lweCeltic kumazantsi-ntshona, kuyinika i-12th-ende yeyona nxweme emhlabeni . Ulwandle lwaseIreland luphakathi kweGreat Britain neIreland. Ngommandla weekhilomitha ezili-242,500 zeekhilomitha (i-93,600 sq mi), i-United Kingdom ngumbuso omkhulu we-78th ngobukhulu emhlabeni. Ikwayilizwe le-22nd-elona lizwe linabantu abaninzi, elinabemi abaqikelelwa kwizigidi ze-66.0 kwi2017. I-UK yidemokrasi engakhethiyo kunye ne-monarchy yomgaqo-siseko. Inkosi ekhoyo ngoku nguKumkanikazi u-Elizabeth II, olawula ukusukela kwi-1952, emenza oyena mntu uphakamileyo kwilizwe jikelele. Idolophu enkulu yase-United Kingdom kunye neyona dolophu inkulu yiLondon, isixeko sehlabathi kunye neziko lezemali elinabemi bendawo edolophini ye-10.3 yezigidi. Ezinye iindawo ezinkulu ezisezidolophini e-UK ziquka iGreater Manchester, iWest Midlands kunye neNtshona Yorkshire, iingingqi iGreater Glasgow kunye neLiverpool eyakhiwe. I-United Kingdom inamazwe amane enza i-England: I-England, iScotland, i-Wales, kunye ne-Northern Ireland. Iintloko zazo ziLondon, i-Edinburgh, iCardiff, kunye neBelfast, ngokwahlukeneyo. Ngaphandle kweNgilani, amazwe anorhulumente wawo ochithiweyo, ngalinye linamandla ahlukeneyo, kodwa amandla anjalo ahanjiswe yiPalamente yase-United Kingdom, engathi yenze umthetho ongaguqukiyo okanye wokupheliswa kwedemoni (i-England ayinawo amandla achasileyo). Indawo ekufutshane ye-Isle of Man, iBailiwick yaseGuernsey kunye neBailiwick yaseJersey abayonxalenye ye-UK, kuba ukuxhomekeka komqhele nguRhulumente wase-Bhritane onoxanduva lokuzikhusela nokumela amazwe. Ukohlula-hlula kunye nokuthathwa kamva kwe-Wales ngu-Kingdom of England, kwalandelwa ngumanyano phakathi kwe-England ne-Scotland e-1707 ukwenza i-Kingdom of Great Britain, kunye nomanyano e-1801 ye-Great Britain kunye ne-Kingdom of Ireland yadala i-United Kingdom IBritani enkulu kunye neIreland. Ishumi elinesihlanu lesithandathu eIreland beshiye i-UK e-1922, beshiya ubukho be-United Kingdom ye-Great Britain kunye ne-Northern Ireland. Kukho iMimandla yaseBritani engaphaya kweLizwe, iindawo eziphantsi koBukhosi baseBritane, ekuphakameni kwayo kwii-1920s, zaquka phantse ikota yobunzima behlabathi kwaye yayilobukumkani obukhulu embalini. Impembelelo yase-Bhritane inokubonwa kulwimi, inkcubeko kunye neenkqubo zezopolitiko ezininzi zangaphambili. I-United Kingdom lilizwe eliphuhlileyo kwaye inoqoqosho lwesihlanu ngobukhulu behlabathi ngegama le-GDP kunye noqoqosho lwethoba ngobukhulu ngokuthenga amandla. Inoqoqosho olunengeniso ephezulu kwaye inomgangatho ophezulu kakhulu wokuPhuhliswa koLuntu, kwi-14th emhlabeni. Kwakuyilizwe lokuqala elinamashishini amakhulu kunye negunya eliphambili lomhlaba ngexesha le-19th nasekuqalekeni kwe20th century. I-UK ihlala ingamandla amakhulu, enoqoqosho olukhulu, inkcubeko, umkhosi, isayensi kunye nefuthe lezopolitiko kwilizwe jikelele. Ngumbuso wezixhobo zenyukliya ezaziwayo kwaye ziyindawo yesithandathu kwinkcitho yomkhosi emhlabeni. Ibililungu elisisigxina le-United Nations Security Council ukusukela kwiseshoni yayo yokuqala kwi-1946. Ibe lilungu eliphambili lobulungu kwi-European Union (i-EU) kunye nomanduleli wayo, i-European Economic Community (EEC), ukusukela i1973; nangona kunjalo, uvavanyo-zimvo kwi-2016 lubangele ukuba i-51.9 ipesenti yabavoti base-UK bakhethe ukushiya i-European Union, kwaye kuxoxwa ngokuphuma kwilizwe. I-United Kingdom ikwalilungu le-Commonwealth of Nations, iBhunga laseYurophu, i-G7, i-G20, i-NATO, uMbutho woBambiswano lwezoQoqsho noPhuculo (i-OECD), i-Interpol kunye noMbutho woRhwebo weHlabathi (i-WTO).